Akhriso: Qaramada midoobay oo war ka soo saartay heshiiskii cadaado ay ku kala saxiixdeen xaaf iyo gaas – Kismaayo24 News Agency
by Tifaftiraha K24 1st June 2017 043
Ergeyga Gaarka ah ee Xoghayaha-Guud ee Qaramada Midoobay (SRSG) u qaabilsan Soomaaliya Michael Keating ayaa soo dhoweeyay wadahadallada nabadeed ee 29ki May 2017 dhexmaray Madaxweynayaasha Cabdiweli Maxamed Cali “Gaas” ee Puntland iyo Axmed Ducaale Geelle “Xaaf” ee Dowlad Goboleedka Galmudug, wadahadalladaas oo nabad iyo kalsooni loogu abuurayo gobollada dhexe, iyadoo diiradda lagu saaray magaalada Gaalkacyo.
“Wadahadallada dhexmaray Madaxweynayaasha Gaas iyo Xaaf aad ayey muhiim u yihiin waxayna leeyihiin yididiilo. Wax ka qabashada cabashooyinka iyo in la helo xal labada dhinacba faa’iido u leh ayaa hadda ah tallaabada horumarineed (hore-usocod) ee gobollada dhexe guud ahaan, gaar ahaan magaalada Gaalkacyo,” ayuu yiri Ergeyga Gaarka ah Keating. “Qof kasta ayay faa’iido ugu jirtaa.”
Labada madaxweyne dowlad goboleed waxay ku heshiiyeen inay soo afjaraan muranka ayna xoojiyaan wadahadallada wax lagu dhisaayo ee u dhexeeya labadooda maamul. Waxay ballan-qaadeen furitaanka waddooyinka si dadka iyo badeecooyinka loogu ogolaado dhaqdhaqaaq xor ah.
Qaramada Midoobay iyo saaxiibbada caalamka waxay diyaar u yihiin inay taageeraan Madaxweynayaasha Gaas iyo Xaaf oo ay kala shaqeeyaan dhamaan deegaanada sidii loo taageeri lahaa geedi-socodka nabadaynta iyo dowlad dhisidda Soomaaliya.
Madaxweyne Farmaajo oo saxiixay ka mid noqoshada Cahdiga Qaramada Midoobey ee Xuquuqda.
TOP NEWS: Dhageyso Maxkamda sare Dalka oo Fadeexad ay kusoo baxday iyo Banaanbax ka dhan ah oo Muqdisho ka dhacay
Sawirro: Al-shabaab oo sheegtay in Muqdisho ay ku dileen mid kamid ah shaqaallaha Xafiiska Ra’isul wasaare kheyre